पर्वत अस्पतालको सेवा सुधार, म्याग्दीले रिफर गरेको शल्यक्रिया पर्वत अस्पतालमा (भिडियोसहित) — SuchanaKendra.Com
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७८/१०/२२ गते
पर्वत । सुत्केरी व्याथाले च्यापेपछि म्याग्दी मालिका गाउँपालिका वडा नं. ४ की २१ वर्षकी तोरण पटेल म्याग्दी जिल्ला अस्पतालमा पुगिन् । म्याग्दी अस्पतालमा सबै परिक्षण सकेपछि बच्चाको मुटुको धड्कन बढेको भन्दै चिकित्सकहरुले अपरेशन गर्नुपर्ने बताए ।
अस्पतालमा विद्युत आपूर्तीमा समस्या भएपछि अपरेशन गर्न नसकिने जानकारी दिए । तत्कालै बाग्लुङ जिल्ला अस्पताल लैजान सल्लाह दिए । बाग्लुङ अस्पतालमा पनि झरीका कारण अपरेशन गर्ने कपडा अभाव भएको भन्दै नसकिने जानकारी दिए ।
बाग्लुङमा पनि नहुने भएपछि हामी हतास भयौं पोखरा लैजान तयारी गर्दै थियौं बिरामीको आफन्त सिता विकले भनिन् तत्कालै सरहरुले पर्वत अस्पतालमा अपरेशन गर्ने बताएपछि सबै सामान बोकेर यता आएका हौं ।
राती १०.३० बजे अस्पताल पुगेकी पटेको सहज रुपमा अपरेशन सफल भएर आमा बच्चा दुबै स्वस्थ रहेको पर्वत अस्पतालका सूचना अधिकारी लक्ष्मण शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुशार हिजो परेको झरी र दिनभरी ३ वटा अपरेशन भै सकेकाले कपडा अभाव भएको र बेनीबाटै अपरेशनका लागि आवश्यक पर्ने कपडा मगाएर सफल शल्यक्रिया गरिएको बताए ।
पर्वत जिल्ला अस्पतालले सेवा सुधार गरेसँगै जिल्लाका साथै बाहिरी जिल्लाबाट समेत सहज ढंगले विशेषज्ञ सेवा लिइरहेको डा. डिबि क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले सुत्केरी, हाईड्रोशिल, हर्निया, एपेडिसाईटिस लगायतका शल्यक्रिया र विशेषज्ञ सेवा पाउन थालेपछि बिरामीको चाप बढिरहेको छ ।
अस्पतालमा प्रयाप्त दरबन्दी र विशेषज्ञ डाक्टरहरु कम भएकाले सोचेजस्तो सेवा दिन नसकेपछि सुधारात्मक हिसावले काम भईरहेको पर्वत अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शंकर गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दरबन्दीको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको र छिटै नै दरबन्दी पनि थप हुने बताए ।